नारी संसार Archives - Merodesh.news
काठमाडौं २३ मंसिर । पौडी खेलाडी गौरिका सिंह एकै सागमा ४ वटा स्वर्ण जित्दै कीर्तिमान बनाएकी छिन् । उनले सोमबार १०० मिटर फ्रीस्टाइलमा स्वर्ण पदक जित्दै १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मा ४...
खोटाङ। प्रदेश नं १ का सांसद उषाकला राईले समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न कपाल मुण्डन गरेर आमाको श्रद्धामा किरियापुत्री बसेको बताइन् । आफूलाई जन्माएर हुर्काउनाका साथै अहिले यो अवस्थामा पु-याउने आमाको निधनपछि कपाल मुण्डन गरी...
धनगडी । कैलालीको धनगडीमा रहेको जिल्ला कारागारमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । फ्रीडम फर फ्रिले कारागारमा रहेका महिला कैदी बन्दीहरुकालागि ७० हजार मुल्य बरावरको फर्म कार्पेटलगायतका सामाग्री सहयोग गरेको हो । धनगडी कारागारका जेलर...
२३ मंसिर २०७५
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाल महिला संघले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारालाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’को राजिनामा माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल महिला...
विराटनगर ११ असोज । ६३ औं प्रहरी दिवसको अवसर पारेर मोरंग प्रहरीले महिला हिँसा बिरुद्ध निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गराएको छ । दिवसलाई भव्यता पुर्वक मनाउदै महिला हिंसा सम्बन्धी घटनाहरू न्यूनिकरण गराउन बिद्यालय स्तरिय महिला हिँसा...
काठमाडौं, भदौ। उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नसकिने बताएकी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ महिला विभागले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले मृत्युदण्डको कानुन अहिलेकै अवस्थामा बनाउन नसकिने स्पष्ट...
एक नम्बर प्रदेशबाट बुधबारदेखी बलात्कार बिरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सूरु
विराटनगर, १४ भदौ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले चार महिने बलात्कार बिरुद्धको अभियान सुरु गरेका छन । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १२ र १३ भदौमा भएको एक नम्बर प्रदेश स्तरिय भेलापछि बिराटनगरबाट बुधबारदेखी चार महिने...
बैतडीकी सरस्वती नेपालीलाई पाँच लाख नगदको दर्नाल अवार्ड
विराटनगर, २९ साउन । दलित अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारबादी अभियन्ता स्वर्गीय सुभाष दर्नालको सम्झनामा प्रदान गरिदै आएको ‘सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल अवार्ड’ बैतडीकी अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीलाई प्रदान गरिने भएको छ । ३० साउन बुधबार प्रदर्शनी...
को को होलान एक नम्बर प्रदेशमा मन्त्री महिला ?
विराटनगर , ९ साउन । महिलाहरुको सहभागी नभएको भन्दै सर्बत्र गुनासो बढेपछि एक नम्बर प्रदेश सरकारमा अव महिलाहरुलाई पनि सहभागी गराउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएसँगै को होला मन्त्री भन्ने चर्चा चुलिन थालेको छ । चौतर्फी गुनासो...
बेनी, २५ साउन। बेनी नगरपालिका–८ क्याम्पसचोक निवासी दिलमाया पुन ५३ वर्ष भइन् । घरायसी काममै दैनिकी बिताउने गरेकी पुन गएको वैशाखदेखि विद्यालय जान थालेकी छिन् । त्यसकारण उनको दैनिकी हिजोआज फेरिएको छ । कक्षा १...